Kubvutwa kuri kuuya. BNL Ministries - sn01
Muna Maraki 4:5-6 Mwari vakati vachatumira muporofita Eria “zuva iro guru raJehovha, uye rinotyisa risati rasvika.” Jesu paakabvunzwa sei vadzidzisi vakati Eria achatanga kuuya, akavaudza kuti Eria achauya kuzogadzirisa zvinhu zvese. Ipapo akavaudza kuti Eria akatosvika ndokucherekedza Johane mubhabhatidzi saiye. Johane paakabvunzwa "ndiwe ani?" akati, "Ini ndiri izwi reanodanidzira musango". Uyu aive Isaya 40:3. Saka murume akazodzwa nemweya waEria aifanira kuuya uye kuzo "agovandudza ". Ndinotenda kuti William Branham aive muporofita uya kudzoreredza izvo zvinhu zvakange zvaenda mukukanganisa. Unogona kufunga kuti zvinonzwika kunge zvinoshamisa, asi Mwari airatidza nguva nenguva, kuti uhu hwakanga isiri yehushumiri zvakajairika, pamwe nezviratidzo zviitiko zvemashura, kunyangwe kumutswa kwevakafa (yapera kusimbiswa nanachiremba). Isu tiri panguva chaiyo yekudzoka kwaJesu - zuva rinotyisa raIshe.
Humwe husiku muna 1946 mutumwa waIshe tasangana naHama Branham kumeso ndokumuudza kuti wakagadzwa kutora chipo chekuporesa kwaMwari kune nyika. Mutumwa akamuudza kuti achazopihwa zviratidzo zviviri kuratidza kuti akatumwa kubva kuna Mwari. Akazozvionera kuti chiratidzo chokutanga chaiva, nokuda kwayo chaiye, panyama kunetsa, vakabata maoko vanhu vanorwara, kunzwa vibrations zvirwere zvavo zvinouraya kuenda rwake mwoyo wake. Mumazuva iwayo ekutanga eshumiro yake ainamatira mazana evanhu husiku hwese kusvikira anzwa kubatikana uye aigona kupera simba kubva pakupera simba. Ipapo chiratidzo chechipiri akauya uye akava zvikuru kuchipedza simba kupfuura kutanga chiratidzo. Kana kuzodzwa kweMweya Mutsvene akatanga kuona kutambudzika kwevanhu, chiono chimwe nechimwe chakadzora simba rake rakawanda kuti aigona chete kunyengeterera nezve vanhu gumi nevashanu kusvika makumi maviri manheru ega ega. Mutumwa akati kana aigona kuwana vanhu kuti vatende naye, hapana chirwere akunde minyengetero yake. Wakati akatsutsumwa kuti vanhu havana kutenda kwaari nokuda kwake yakaderera chinzvimbo, ipapo Mwari akange awedzera zviratidzo zviviri seuchapupu hwekutumwa kwake.
Tarirai, ndichakutumirai muprofita Eria, zuva iro guru raJehovha, uye rinotyisa risati rasvika.
Iye achadzosera mwoyo yamadzibaba kuvana vavo, nemwoyo yavana kumadzibaba avo; kana kuti ndichauya ndigorova nyika nechituko.
Nguva pfupi asati kwezuva pamusoro Feb 28 1963, munhu ndezvokuti yakanaka uye asinganzwisisiki gore yakatsvairwa chamhembe mhiri Arizona USA. Magazini maviri akatakura mufananidzo uye chirevo cheichi chinoshamisa chiitiko. (Science Magazine 19/4/63 uye Life magazini 17/5/63). Chikonzero chekufarira ndechekuti iro gore rakakura yakaturikwa mudenga rebhuruu pakakwirira umo hapana hunyoro chiripo vaumbe gore. Hapana tsananguro inoshanda yakapihwa nesainzi kubvunza mairi, asi zvisingazivikanwe pasirese, zvaive izvo kuti muna Chivabvu 22, 1962, mwedzi miviri isati gore akaonekwa, Hama Branham vakawana chiratidzo izvo zvaakarondedzera kuungano yake muJeffersonville.
Izvi zvakanyorwa pamharidzo yekuti "Varume, ndiyo ichi nguva?"
Hama Branham vaivhima mumakomo akapoteredza Tucson, Arizona, apo zviitiko muchiratidzo yake pakarepo zvakaitika. Manomwe dots tuduku akazviratidza mudenga pamusoro pake. Vakamupa basa kuzarura zvisimbiso zvinomwe mubhuku raZvakazarurwa. MuGore ndiye nechiso chaKristu.
Dhawunirodha (Chirungu) Is this the sign of the end Sir
Verenga zvizere nyaya... "The acts of the Prophet" - Pearry Green.
Kuitira Mwari Basa.
Vanhu vakawanda vanoda kushumira Mwari, asi handizivi sei. Ivo vanoita chikanganiso nokuenda nezvazvo nenzira isiriyo.
Muna 1 Makoronike 13, Dhavhidhi aida kuitira Mwari basa, nekudzosa Areka yesungano kubva kuKiriati jearimi. Vatungamiriri vese, uye vanhu vakatenderana. Areka yakanga yakatakurwa pangoro yakadhonzwa Nzombe. Vari munzira, nzombe dzakanga dzogumburwa uye Areka yakanga yoda kuwira pasi mungoro. Uza akatambanudza ruoko rwake kuti arimise uye Jehovha akamurova akafa. Izvi zvakaitika, nekuti Areka yaifanirwa kutakurwa pamafudzi evapirisiti, kwete mungoro. Uyu aive Dhavhidhi, achiedza kuitira Mwari basa pasina icho chiri kuda kwake. Aida kushandira Mwari, asi aikuita nenzira isiriyo.
Dhawunirodha (Chirungu) Trying to do God a Service.
Minomwe remubatanidzwa rokudzikinura mazita aJehovha.
Mwari ane mazita mazhinji okuremekedza. (Kune anopfuura mazana manomwe muBhaibheri). Kune boka remazita aya, iyo inonzi “Minomwe remubatanidzwa rokudzikinura mazita aJehovha.
Mufananidzo uyu usati watorwa weShongwe yoMoto, muHouston Texas, Hama F. F. Bosworth vachangobvunza mubvunzo uyu, “Ita mazita manomwe akaomarara aJehovha, shandisa kuna Jesu Kristu?”
“Hongu” ndiyo yaive mhinduro.
Pakutanga, Mwari akapa Adamu basa rekupa zita zvinhu. [Izvi zvichiri kuenderera mberi nhasi]
Panguva dzakasiyana muBhaibheri, vatendi vakapa mazita kuna Mwari, kutsanangura hunhu hwake, kunyanya paAinge asangana nezvavanoda.
Hama Branham vakaparidza akatevedzana mumharidzo idzi muna Chikunguru 1962.